China umatshini omkhulu womgquba wemfuyo yenkomo umgquba wewindows
I-M6300 ngowona mshini mkhulu wokuzenzela umgquba e-China, osebenza ububanzi obungama-6.5m, nobude bokusebenza bungu-2.5m. Inokuzalisa ngokuzenzekelayo ukujika, ukuvusa, ukuxuba, ukutyumza kunye nokufaka ioksijini izinto zokwenza umgquba, kwaye inkqubo yokutshiza inokongeza amanzi kunye nokubila kwinto yokwenza umgquba. I-M6300 inokunceda ukukhuthaza izinto zokwenziwa komgquba ukuze zichume ngokupheleleyo nangokukhawuleza kwaye zibe sisichumiso esondlayo.
Ukusebenza komthamo: I-3780m³ / h
Kuza kwenzeka ntoni ukuba sikhuphela umgquba wezilwanyana kwindalo esingayifuni?
Ukuwasebenzisa kakuhle la manyolo ezilwanyana kwaye uwenze abe luncedo eziphilayo isichumiso nge-TAGRM’Umgquba ujike.
1. Ukuphucula i-organic contain ukuya kwi-50%. Ngokwesiqhelo umgquba wemfuyo kufuneka wongeze inkunkuma kamasipala kunye nengca yezolimo, uthuthu lomthi kufuneka longeze udaka lukamasipala, njl.
2. Yenza into efumanekayo yomgquba enokulungela umgquba ujike umsebenzi wo.
3. Jika, xuba, utyumze kwaye wenze ioksijini ifuthe lomgquba rhoqo, amanzi okanye ukubila okuthile kunokufuneka.
4. Jonga inkqubo yokubila kunye nesiphumo. Xa ivumba lomgquba lilungile, umbala womgquba ukufutshane nombala omdaka, ulwakhiwo lomgquba luyakhululeka, i-C / N <0.6, iqondo lobushushu lizinzile kwaye liyafana nobushushu bommandla, ukubila kuyaphumelela.
Umzekelo M6300 Ukucoca komhlaba 100mm H2
Rate Amandla 250KW, 340PS） Uxinzelelo lomhlaba 0.82Kg / cm²
Ukukala isantya I-1800-2500 r / min Ububanzi bokusebenza 6300 ~ 6500mm Ubukhulu.
Ukusetyenziswa kwepetroli ≤235g / KW · h Ukuphakama kokusebenza 2500mm Ubukhulu.
Ibhetri 24V 2 × 12V Imilo yemfumba Unxantathu 42 °
umthamo wezibaso 320L Phambili isantya L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Ukunyathela okurhubuluzayo Ubungakanani: W2 Isantya esingasemva L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Ubungakanani bokukhasa 2250 × 400mm Isinyithi ngesihlangu Yondla ububanzi bezibuko 6885
Ngaphezulu 7535 × 2895 × 3100 mm I-W3 × L1 × H1 Ukuguqula irediyasi 3900mm imiz
Ubunzima 11000kg Ngaphandle kwepetroli Imo yokuqhuba Ulawulo ngamanzi
Ububanzi roller Ubunzima: 979mm Ngemela Amandla okusebenza I-3780m³ / h Ubukhulu.
I-M6300 yokujika komgquba iya kulayishwa kwi-40 HQ. Elona candelo likhulu lomatshini womgquba liya kupakishwa ze, amanye amalungu aya kupakishwa ebhokisini okanye kukhuselwe iplastiki. Ukuba unazo naziphi na iimfuno ezizodwa ukupakisha, siya kupakisha njengoko isicelo sakho.
Iindleko zezabelo Nanning Tagrm Co., Ltd.
Iselfowuni: + 86-15177788440
UWhatsApp: + 86-15177788440
Egqithileyo Umhlaba odume ngokuba ngumgquba ojikajika iworow kwimfuyo yenkomo
Okulandelayo: I-CE irhasi yomgquba umgquba wewindows ojikelezayo ojikelezayo
umatshini womgquba wehagu
ihagu umgquba ukwenza umatshini
umxube womgquba wehagu
umgquba wehagu ujike ujike
umgquba wehagu umgquba we Window ujike
Ihlabathi elidume ngokuba ngumgquba ngewindows ukujika ...
Umatshini wokwenza umatshini wokuthengisa oshushu ...
Ixabiso Factory idada umgquba ukwenza machin ...
CE irhasi umgquba umgquba Window Turner self-pro ...
Lixabiso umatshini wokuxuba umgquba ...
I-TAGRM yomgquba ojikajika nge Window ujike ...